KIT BQ Hephestos | थ्रीडी प्रिन्टरको विधानसभा र विश्लेषण नि: शुल्क हार्डवेयर
यस लेखमा हामी के भएको छ वर्णन गर्नेछौं हाम्रो अनुभव थ्रीडी प्रिन्टर KIT BQ HEPHESTOS मा माउन्ट गर्दै। २०१ prin को अन्त्यमा निर्माताले प्रस्तुत गरेको यो प्रिन्टर २०१ 2016 मा जारी गरिएको यो मोडलको परिमार्जन हो। यद्यपि यो RepRap समुदायबाट आएको मोडेलबाट प्रेरित भएको हो। BQ द्वारा निर्मित र डिजाईन गरिएको इलेक्ट्रोनिक्स समावेश गर्दछ र सबै समावेश गरिएका अंशहरूको डिजाईन मुद्रणमा स्थिरता र शुद्धता सुधार गर्न संशोधित गरिएको छ।
म्याग्इभरको आफैंलाई उत्प्रेरित गर्न धेरै मौसमहरू हेरेपछि हामीले केआईटीमा प्रिन्टर चढाउने हिम्मत गरेका छौं र हामी केश, संकेत र सम्मेलनको भिडियो सारांशका साथ वर्णन गर्नेछौं कसरी अनुभवले
2 अनबक्सि and र 3D प्रिन्टरको KIT BQ हेपेस्टोसमा असेंबली
2.1 BQ ले KIT मा प्रिन्टरहरू क्रान्ति गर्न चाहन्छ जस्तै Ikea फर्निचर क्रान्तिकारी
2.2 समय सम्मेलनको लागि खर्च भयो
2.3 निर्माण प्लेटफर्म स्तर
3 KIT BQ Hephestos मा थ्रीडी प्रिन्टरको प्राविधिक पक्षहरू र विशेषण
4 अन्य प्राविधिक पक्षहरू
5 दिनहुँ KIT BQ हेपेस्टोसमा थ्रीडी प्रिन्टरको साथ
6 निर्माता समुदायको साथ एक मनपर्ने टीम
7.1 मूल्य र वितरण
यसको व्यावसायीकरणको सुरु भएदेखि नै बजारमा धेरै सुधारहरू देखा परेको छ जुन BQ मोडेलले समावेश गर्दैन, आरआरपीमा भर्खरको कटौतीले यस टीमलाई फिटलाइटमा फिर्ता राख्छ। यदि हामीले हाम्रो बजेट बढायौं भने हामी एउटा मोडल लिन सक्दछौं जुनमा तातो पलंग समावेश छ र हामीसँग पनि छ यस ब्लगमा विश्लेषण गरियो वा हामी BQ अपग्रेड "तातो बेड" खरीद गर्न सक्छौं यसको वेबसाइटमा बजारहरू.
अनबक्सि and र 3D प्रिन्टरको KIT BQ हेपेस्टोसमा असेंबली
अन्य लेखहरू जस्तो छैन जुनमा हामीले प्रिन्टरहरूको समीक्षा गर्‍यौं। उपकरणको प्राविधिक सुविधाहरूको समीक्षा गर्न सुरु गर्नु अघि, हामी प्रिन्टर जम्मा गर्ने अनुभव कसरी भयो भनेर बुझाउन ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं।
BQ ले KIT मा प्रिन्टरहरू क्रान्ति गर्न चाहन्छ जस्तै Ikea फर्निचर क्रान्तिकारी
प्रिन्टर आउँछ कम्प्याक्टमा प्याक गरियो र प्याकेज ढुवानी गर्न सजिलो छ कुनै व्यवसाय बाट। यो एक टोली हो जुन हामी सजीलै पाउन सक्छौं शपिंग मल्ल र इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा, हामी यसलाई लगभग हाम्रो देशको कुनै पनि शहरमा प्राप्त गर्न सक्षम गर्न सक्दछौं बिना विशेष स्टोरमा जानुन् जुन अवस्थित गर्न अझ गाह्रो हुन सक्छ। यो अनलाइन मार्केटिंग गरिएको मोडेल हो धेरै लोकप्रिय र प्रसिद्ध वेबसाइटहरू द्वारा।
जब हामी बाकस खोल्छौं हामी लगभग एक पाउँछौं दुई फ्लोरमा सयौं टुक्रा संगठित। यति धेरै उत्तम अर्डर गरिएको टुक्राहरूको दृश्य केही डरलाग्दो छ, तर हामीले यसलाई द्रुत रूपमा अवस्थित गर्यौं मार्गदर्शन र हामी देख्छौं कि प्रत्येक चरणमा यो पूर्ण रूपले विस्तृत छ कि कुन टुक्राहरूको उपयोग गर्ने र यी पूर्ण रूपमा गन्ती गरिएको छ ताकि त्यहाँ कुनै गडबड छैन। यसले हामीलाई सम्झाउछ (दूरी बचत) फर्निचर कोडिंगका लागि म्यानुअलमा IKEA.
दोस्रो डर यो हो जब हामीले बक्स खोल्छौं जुन सबै हार्डवेयर समावेश गर्दछ, पागल र बोल्टको मात्रा जुन हामीले प्रयोग गरेर समाप्त गर्नेछौं भारी छ। म्यानुअल संग एउटा टेम्प्लेट सबै नट्स र बोल्टको साथ वास्तविक आकारमा सामेल गरिएको छ ताकि तिनीहरूलाई चाँडै पहिचान गर्न सकिन्छ। यस हिसाबले, यो धेरै उपयोगी छ यदि प्रत्येक प्रकारको विभाजित गरिएको झोलालाई लेबल गरिएको थियो भने।
ठिक छ, काममा लागौं, भिडियोको लिंक यहाँ छ ताकि तपाईं आफैंले यो कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि यो जस्तो किट जम्मा गर्न मलाई मेरो जस्तो बेसी लाग्ने खर्च लाग्छ:
असेंबलीमा हामीले केही साना समस्याहरू सामना गरेका छौं जुन उडानमा हामी समाधान गर्न सक्षम भएका छौं। हामी तिनीहरूलाई तल विस्तार गर्दछौं:
केहि मुद्रित भाग मिलिमीटर फिट हुँदैन डण्डमा र जस्तै र हामीले केही बल गर्नु पर्छ। यसले यी मुद्रित भागहरू जोड्ने जोखिम चलाउँछ।
धेरै स्टार्टर टुक्राहरूमा प्वाल हुन्छ तपाईं एक सोल्डरिंग फलाम को प्रयोग गरी पागल फिट हुनु पर्छ। यस विवरणको बारेमा हामीले निर्माताको म्यानुअलमा कुनै सन्दर्भ फेला पारेनौं। तर यदि हामी भिडियोमा नाम देख्न सक्छौं कि निर्माता पोर्टलमा छ DIWO
किटमा सम्मेलन र रेन्चका लागि आवश्यक सबै एलन कुञ्जीहरू समावेश छन्। जब ती जिद्दी सँगै निचोल्छन् हामीलाई २ वानाहरू चाहिन्छ।
क्षैतिज र ठाडो माउन्टिंगलाई जोड्ने नटहरू बाकसमा समावेश गरिएको रिन्चको साथ कडा गर्न सकिदैन। हामीलाई ठूलो चाहिन्छ।
El तारिiring प्रदर्शन गर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक बोर्डमा छ एक भ्रमपूर्ण तरीकामा वर्णन गरियो म्यानुअल मा। हामीले यसलाई ठीक उल्टो जडान गर्नुपर्‍यो जुन यो हामीलाई लाग्छ यो म्यानुअलमा स indicates्केत गर्दछ। एक कनेक्टर प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ जुन केवल सही दिशामा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
हट प्रिन्डर अव्यवहारिक र कष्टकर छ जब प्रिन्टर प्रयोग गर्दा हामी यसलाई हटाउन समाप्त भएका छौं।
El ठाडो फ्रेम धातु रंगिएको छ एक खैरो टोन मा। केहि कुनामा तपाईले कुनै पनि हिसाबले प्रिन्टहरूलाई असर नगरी पेन्ट चिप गर्न सक्नुहुन्छ।
समय सम्मेलनको लागि खर्च भयो
हामीले प्रयोग गरेका छौं लगभग २ र आधा घण्टाको session सत्रहरू। हामी बिस्तारै गएका छौं, प्रत्येक चरण जाँच गर्दै र जाँच गर्दैछ कि प्रक्रियाको रेकर्डि recording बन्द हुँदैन। सामान्य सर्तहरूमा विधानसभा यो हामीलाई लाग्यो सरल तर लामो। म्यानुअल धेरै राम्ररी वर्णन गरिएको छ, र निर्मातासँग यसको वेबसाइटमा भिडियोहरूको स collection्ग्रह पनि छ जुन सम्पूर्ण प्रक्रियाको विवरण दिन्छ।
डिजाइन स्तरमा, सेट राम्रो टीमको जस्तो देखिन्छ, दौडको अन्त्य बाहेक। एकचोटि हामीसँग उपकरणहरू पूर्ण रूपमा जम्मा भएपछि तिनीहरू स्थिर छैन र उपकरणहरू चलाउँदा उनीहरूले हामीलाई सार्दैनन् कि हामी सावधान हुनुपर्छ।
प्रिन्ट बेस चार स्क्रूले चार बिन्दुहरूमा समतल गरिन्छप्रिन्ट गर्न सुरू गर्नु अघि यसलाई दुई चार पटक प level्क्तिमा स्तरबद्ध गर्न सिफारिस गरिन्छ।
El BQ ले किट बेच्दैन को अपडेट आत्म-स्तरयद्यपि फोरममा उनीहरूले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई फर्मवेयरलाई परिमार्जन गर्न मद्दत गरेका छन यस फंक्शनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तत्वहरूको प्रयोग गर्न।
KIT BQ Hephestos मा थ्रीडी प्रिन्टरको प्राविधिक पक्षहरू र विशेषण
प्रिन्टर राम्रो प्रदर्शनको साथ एक मोडल हो र यसले राम्रोसँग उमेर कसरी थाँहा जान्न सक्छ को एक संकल्प छ Mic० माइक्रोन जेड तह आजका धेरै प्रिन्टरहरूसँग समान छ र हामी गर्न सक्ने धेरै प्रिन्ट कार्यहरूको लागि पर्याप्त। समावेश गरेर धातु फ्रेम यसको वजन अन्य समान प्रिन्टरहरू भन्दा केहि बढी छ, जे भए पनि 13 किलोग्राम यो अत्यधिक तौल होईन र हामीलाई आवश्यक भए हामीलाई यो आरामसँग सार्न अनुमति दिनेछ।
El 215x200x180 प्रिन्ट क्षेत्र यो प्राय: प्रिन्टहरूको लागि उपयुक्त छ, यद्यपि हामीलाई यसको आवश्यकता छ भने हामी फराकिलो आधार लिन सक्दछौं।
La प्रिन्ट गति १००mm / s हो अधिक आधुनिक प्रिन्टरहरूको गतिको तुलनामा केही ढिलो।
यस प्रिन्टरमा प्रयोग गरिएको extruder हामीलाई फिलामेन्ट प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ PLA र जस्तै जस्तै काठ वा धातुई फिलामेन्टहरू। यो पनि राम्रो प्रतिक्रिया लचिलो फिलामेन्ट्स तर हामी उच्च फ्यूजिंग तापक्रम वा न्यून आसंजनको साथ फिलामेंट प्रयोग गर्न सक्दैनौं किनकि प्रिन्टरको साथ तातो पलंग समावेश गर्दैन। दुबै तातो ओछ्यान र नयाँ बीक्यु हेपस्टोस २ प्रिन्टरको एक्सट्रुडर एक्सेसरीजहरू हुन् जुन हामी छुट्टै किन्न सक्छौं।
El एक्स्ट्रुसन कार्टमा एक कम्प्याक्ट उपस्थिति हुन्छ जे भए पनि सबै तारिक कनेक्टरहरू ठुलो र उही ठाँउमा अवस्थित छन्। को एक्स अक्ष बेल्ट दृढ रूपमा संलग्न छन् र कुनै पनि समय ढीला छैन.
हामीले पहिले विश्लेषण गरेका अन्य प्रिन्टरहरूमा जस्तै हामी एउटा अन / अफ स्विच छुटाउँछौं। एक अस्थायी समाधानको रूपमा हामी केबललाई जहिले पनि बाहिरी उर्जा आपूर्तिबाट विच्छेदन गर्न सक्दछौं किनकि यसमा ठोस निर्माण छ।
यो एक प्रिन्टर हो जुन SD बाट प्रिन्ट गरेर वा USB USB मार्फत पीसीमा जडित स्वायत्तताले कार्य गर्न सक्दछ। दुबै केसहरूमा यसले राम्रोसँग कार्य गर्दछ। यदि हामी चाहन्छौं भने एक टोली संग वाइफाइ जडान हामी सँधै सानो अतिरिक्त लगानी गर्न सक्दछौं र एक सर्भर स्थापना गर्न सक्दछौं रास्पबेरी पाई Oct मा अक्टुप्रिन्ट (मोडेलमा वाइफाइ मानकको रूपमा समावेश छ)। हामीले यो परीक्षण गरेका छौं र यो पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
वस्तुहरू टुक्रा टुक्रा गर्न हामीले CURA प्रयोग गरेका छौं, एउटा प्रोग्राम जुन हामी धेरै प्रशंसक हौं र यो प्रिन्टरसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छ। त्यसोभए हामीले भर्खर GCODE फाईलहरू बचत गर्नुपर्नेछ SD कार्डमा डिजाइनहरू जुन हामी प्रिन्टरमा राख्छौं। किटले कुनै एसडी कार्ड समावेश गर्दैन
SD कार्ड रिडर प्रदर्शनको साथ एकीकृत छ र प्रिन्टरको शीर्षमा अवस्थित छ यसलाई सजिलैसँग जडान गर्न र कार्डहरू विच्छेदन गर्न। को प्रदर्शन धेरै राम्रो चमक छ तर हामी आश्चर्यचकित भयौं कि कन्ट्रोल ह्विल प्लास्टिकको ट्रिमको साथ आएको थिएन।
दिनहुँ KIT BQ हेपेस्टोसमा थ्रीडी प्रिन्टरको साथ
प्रिन्टर डिस्प्लेले प्रिन्टहरूको स्थितिमा सूचनाहरू देखाउँदछ, अघिल्लो अवसरहरूमा जस्तै प्रगतिमा काम समाप्त गर्न बाँकी समय देख्न हामी हराउँदछौं। यो कुनै शुन्य प्रिन्टर होईन, त्यसैले हामी उपकरणको रूपमा एउटै कोठामा काम गर्न सक्दछौं हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई जोखिममा नराखीकन।
प्रिन्टहरू एक छ राम्रो समाप्त र राम्रो विश्वसनीयता कायम छ र कम त्रुटि दर टुक्रा पछि.
तीस भन्दा बढी टुक्रा प्रिन्ट पछि हामीले फेला पारेनौं सबै पागल र युनियनहरूको समीक्षा गर्यौं हामीले उपकरणको अधीनमा राख्यौं जुन तीव्र प्रयोगको साथ ढीला वा बिग्रिएको छैन केहि पनि छैन.
निर्माता समुदायको साथ एक मनपर्ने टीम
निस्सन्देह यस टोलीको बारेमा हामीलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गरेका पक्षहरू मध्ये एक हो जानकारी, संशोधन र एड्स को अपार मात्रा जुन हामी फेला पार्न सक्छौं अनलाइन यस प्रिन्टरलाई सुधार गर्ने अभिप्रायले।
यो एक धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यदि हामी चाहन्छौं कि हाम्रो प्रिन्टरले यसको प्रदर्शन सुधार गर्न विकसित गर्न सक्यो। सेल्फ-लेभलि sen सेन्सर देखि माउन्टि parts पार्ट्समा सुधार गर्नको लागि असेंब्लीलाई थप स्थिरता दिनुहोस्। जहाँ हामी हेर्न सक्छौं, हामी प्रिन्टरको बारेमा जानकारी फेला पार्नेछौं; थिंगिभर्सि , आधिकारिक फोरममा मा Youtube …। जे भए पनि हामी जहाँ हेर्छौं, हामी सँधै यस उपकरणको साथ धेरै प्रयोगकर्ताहरू भेट्टाउनेछौं। यस प्रिन्टर को लोकप्रियता को लागी धन्यवाद हामी धेरैfहुनेछौंठूलो संख्यामा मेकरले परीक्षण गरेका बिभिन्न संशोधनहरू फेला पार्न सजिलो छ.
हामीले PLA मा धेरै परिमार्जनहरू छापेका छौं र भेला गरेका छौं यसले हामीलाई उपकरणको उपस्थिति सजिलै सुधार गर्न अनुमति दिएको छ। हामीले केहीका लागि अफिस क्लिपहरू साटासाट गरेका छौं भागहरू विशेष रूप बाट गिलास समात्न डिजाइन गरिएको जसमा हामी प्रिन्ट गर्छौं, हामीले ए जोड्यौं फिलामेन्टका लागि गाईड, हामी एक समावेशीएको छ प्रदर्शनको नियन्त्रणमा बटन र हामीले सुधार गरेका छौं Z अक्षको साथ आन्दोलनको प्रभारी डाकूहरूको समर्थन गर्दछ.
हामी डिस्प्ले सुशोभित गर्न बक्सलाई प्रिन्ट गर्ने योजना बनाउँदछौं र वेबक्यामको लागि समर्थन थप्नको लागि। अक्टुप्रिन्टमा हामी केहि विशिष्ट वेबक्याम मोडेलहरूको साथ स्ट्रिम थप्न सक्छौं र हाम्रा प्रभावहरू निगरानी गर्न सक्छौं कि हामी प्रिन्टरको छेउमा छौं वा धेरै किलोमिटर टाढा।
जबकि यो सत्य हो कि केही प्राविधिक सुविधाहरूको समीक्षा गर्दा मोडेलको सरलता प्रस्ट हुन्छ, KIT BQ हेपेस्टोसमा थ्रीडी प्रिन्टर एक हो उत्कृष्ट थ्रीडी प्रिन्टिंगको दुनियामा आफूलाई परिचय गराउन। एकातिर हामीसँग एउटा टोली छ धेरै सामग्री मूल्य यसले हामीलाई ठूलो लगानी बिना नै मुद्रण सुरू गर्न अनुमति दिनेछ। अर्कोतर्फ, भएको 3D मुद्रक tan लोकप्रिय प्रिन्टरको साथ हामीसँग भएको कुनै समस्या एक फोरम वा अर्कोमा समाधान फेला पार्न सकिन्छ। थप रूपमा, टोलीसँग केहि विस्तार विकल्पहरू छन् जुन हामीलाई मध्यम अवधिमा विकसित गर्न र सुधार गर्न अनुमति दिनेछ। हामी BQ विकास गर्न चाहन्छौं एक नयाँ एम्बिशन KIT जुन सम्भावना समावेश गर्दछ आत्म-स्तर। यो प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार र समृद्ध गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो
यो एक धेरै लोकप्रिय उपकरण हो जुन हामी व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि किनमेल केन्द्रमा फेला पार्न सक्छौं। आरआरपीको भर्खरको समीक्षा पछि हामी यो प्रिन्टरलाई एकका लागि प्राप्त गर्न सक्दछौं € 499 को राशि
निर्माता समुदायबाट ठूलो समर्थनको साथ टीम
स्टोरहरूमा उपकरणहरू फेला पार्न सजिलो
नटहरू सोल्डरिंग फलामको साथ भागहरूमा इम्बेड गरिएको हुनुपर्दछ
तातो पलंग समावेश गर्दैन
सेल्फ-लेवलिंग समावेश गर्दैन
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » KIT BQ Hephestos मा थ्रीडी प्रिन्टरको असेंबली र विश्लेषण
KLIO डिजाईनले सिर्जना गरेको 3D प्रिन्ट कार यस्तो देखिन्छ
पीसी चुनौती, एक नयाँ रास्पबेरी पाई चुनौती